5 L DeSugar Rice Cooker HeDaChu- ကစီဓါတ်လျှော့ ထမင်းပေါင်းအိုး – SHWEMall
Home ›5L DeSugar Rice Cooker HeDaChu- ကစီဓါတ်လျှော့ ထမင်းပေါင်းအိုး
Ks 55,500 Ks 55,500
Save Ks 18,500
Default Title - Ks 55,500 MMK Quantity
🌟🌟🌟🌟🌟ကစီဓါတ်လျှော့ ရေစစ် အလုပ်မရှုပ်ထမင်းအိုး လေးတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်ပါတယ်.... ၃ လုံးချက်...
သင့်ရဲ့ကျန်းမာတဲ့ စားသုံးမှုပုံစံကို ရိုးရာရေငှဲ့ (စစ်) ထမင်း နဲ့ စတင်လိုက်ပါ...အလိုအလျှေက် ရေစစ်ပြီးသားမို့ ကစီဓါတ်လျှော့ထမင်းစားဖို့ အလုပ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့...
ဆီးချိုသမားများအတွက်၊ ကျန်းမာစွာ စားသုံးလိုသူများ အတွက် .... ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုက်ညီသော၊ သကြားလျှော့၊ အလုပ်မရှုပ် ရေစစ် ထမင်းပေါင်းအိုး.. ထမင်းပေါင်းအိုးဆိုပေမယ့် ချက်၊ ပြုတ်၊ ပေါင်း အားလုံး ကို ဘက်စုံသုံးလို့ရတယ်နော်...ခလုတ်လေး တစ်ချက် ၂ ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ချက်လို့ရတယ်နော်...
• Cholesterol၊ သကြားဓါတ် မြင့်လို့ မစားမဖြစ်စားရသူတွေအတွက်
• ပိန်ခြင်လို့ အဆာခံပြီး မစားရသူတွေအတွက်
• သကြားဓါတ်များမှာစိုးလို့ မစားရဲသူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်
• အခြားသူ သတ်သတ်ချက်ပေးရလို့ အလုပ်မရှုပ်စေခြင်လို့ မစားရဲတဲ့သူတွေအတွက်
အဆင့် ၃ဆင့်နဲ့ ကစီဓါတ်လျှော့ချ
၁.အိုး ၂ ထပ်ပါပြီး အိုးသေးမှာ ပေါက်များ ပါဝင်။ အိုးသေးထဲကို ဆန်ထည့်ပြီး အိုးသေးကို အိုးကြီး ထဲသို့ထည့်ပြီး ရေကိ ဆန်နှင့်အညီ ထည့်။ အထူးစီမံထားသော အပူပေးစနစ်ဖြင့် ပြင်းထန်စွာ အပူပေးလိုက်ပြိး ကစီဓါတ်များရေနှင့်ပါသွားသည်
၂. သူ့အပူပေးချိန်ပြီးလျှင်ရေစစ်ကျသွားပြီး ထမင်းက အိုးသေးတွင်ကျန်ခဲ့ပြီး၊ ထမင်းရည်က အိုးကြီးထဲတွင်ရှိနေမည်
၃. ထမင်းရည်နှင့် ထမင်းကို ကျက်အောင် ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ဆက်ပေါင်းတာကြောင့် ထမင်းက ရိုးရိုးထမင်းလိုပဲ စားလို့ကောင်းတယ်..ဖွယ်ဖွယ်ကြီးမဖြစ်နေဘူး
✅ကစီဓါတ်ကျထမင်း၊ ရိုးရိုးထမင်း၊ ဆန်ပြုတ်၊ အပေါင်း၊ ဟင်းရည်၊ အပူထိန်း စသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်သည်...
✅အိုး၂ထပ်၊ အပေါ်အိုးက ပတ်ပတ်လည် အပေါက်ပါတာကြောင့်၊ ရေစစ်အားပိုကောင်းတယ်
✅ရေငှဲချက်တာနဲ့တူပေမယ့် နည်းပညာကြောင့် ထမင်းက ပုံမှန်ချက်တာထက်တောင် စားကောင်းသေးတယ်။
✅တစ် ချက်၊​ နှစ် စစ်၊ ၃ ပေါင်း ... အဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့် ကစီဓါတ်ကျဆင်း အောင် ချက်ပြုတ်သည်။
✅Food Grade အသုံးခံ 304 Stainless Stell ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အတွင်းအိုး ၂ ထပ်။
✅စားကောင်းသောက်ဖွယ်များအတွက် ၂၄ နာရီအတွင်း ကြိုတင် စီမံနိုင်ခြင်း မနက်ခင်းစားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်... ညနေခင်း အိမ်ပြန်စားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစိ....ထမင်းစားခါနီးမှ ထချက်စရာမလိုဘဲ ၂၄ နာရီအတွင်း ကြိုတင် အချိန်ကိုက်ထားလို့ရခြင်း...
1.2 L DeSugar Rice Cooker HeDaChu - ကစီဓါတ်လျှော့ ထမင်းပေါင်းအိုး
Sale price Ks 39,000 Ks 39,000 Save Ks 13,000